Mitambo yemitambo 2021: ichokwadi kana musimboti wetariro? - Game poindi - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | February 21, 2021 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, CCXP Cologne, Gamescom muCologne, nhau, Kokorodzano yekutamba muCologne, Tamba!, GAME muEssen, Nuremberg Toy Fair, Events, Vhidhiyo mitambo
Kuti mitambo yemitambo kana zviitiko zvakakura zvinogona kuitika muna 2021 zvinoenderana zvakanyanya nedenda. Kunyangwe kana mushandirapamwe mukuru wekudzivirira munhoroondo yeGermany uchiri kuitika, ichi hachisi vimbiso yekuti coronavirus inogona kuwanikwa zvekuti magungano nemitambo yemitambo inogona kuitwa muna 2021. Zvakadaro: vamwe varongi vakatara mazuva. Chii chichaitika pazviri? Nguva chete ndiyo ichataura.
Dai taizongoenda zvinoenderana nemamiriro azvino eCorona uye tichivimba nekunzwa kwedu mudumbu, ongororo yemitambo yemitambo muna 2021 ndeiyi: Hazvizoitike - zvirinani kwete mumafomati anozivikanwa. Huwandu hwehutachiona hwekoronavirus huri kuramba huchidzikama, asi Robert Koch Institute ine kukosha kweR pamusoro pe1. Mhedzisiro: kuwedzera kwenhamba dzehutachiona, kana ikaramba yakadaro. Saka rinogona kunge riri rimwe gore rakashata kune indasitiri yechiitiko, kunyangwe kuwedzera kwenhamba yekudzivirira. Zvakangodaro, vamwe varongi vari kutarisira kuvandudzwa uye vari kuseta misi, nguva pfupi yadarika iyo EGX 2021 muLondon.
Game fairs 2021: vateveri vanotarisira, realists vanofuratira pazviri
Varongi veEGX 2021 muLondon vakatara zuva regungano muna Gumiguru. Chiitiko ichi chakarongwa kuti chiitwe pakupera kwesvondo rekutanga remwedzi. Inofanira, nokuti panguva imwechete iyo zuva rakaziviswa, boka reEGX rinoratidza kuti chiitiko chichaitwa chete kana chiri chokwadi. Kokorodzano inoziviswa ne "tarisiro uye chengetedzo mupfungwa". Vamwe vateveri vanokahadzika nezvezvirongwa, asi vachine tariro yekuti chiitiko chinogona kuitika.
Munyika ino zvakare, tariro ichiri kutonga. Saka varongi ve "play yet!" MuDuisburg rimwe zuva rezhizha rakaiswa kare kare, uye izvi hazvisati zvagadziriswa - kunyangwe mukana wekuita kutengeserana muzhizha wakaderera. Vanosvika zviuru zana nemakumi maviri neshanu vanhu vari kubaiwa nhomba yekoronavirus paavhareji zuva rega rega muGermany, zvinotariswa zvichiri pamapoka anotambura uye mapoka ehunyanzvi akabatana nawo. Iri kuwedzerwa zvishoma nezvishoma, uye majekiseni ari kukurukurwa zvakare mumaitiro evanachiremba kubva munenge muna Kubvumbi. Kana chirongwa chikashanda, pachava nemwedzi miviri kusvika "mutambo uripo!". Kunyange kana zvinhu zvose zvikafamba zvakanaka, paizova nekutengeserana nguva pfupi yadarika yakatenderedza 14.000 vashanyi hazvigoneke - zvakanyanya nekutsvaga kune yakasimba yehutsanana pfungwa uye yakakwirira chengetedzo mitemo, uyezve pamwe nechikamu chevashanyi uye yakanyanya kukwirisa mari yekupinda kuitira kuti ukwanise kuita mari zviyero. Uye kana mafeni nevashambadziri votanga kushanya inyaya yakasiyana zvachose.
Saka hazvitaridzike zvakanaka kune yezhizha mutambo fair. Kunyangwe ivo vane ruzivo varongi veGamescom vane munguva pfupi yapfuura yakabvunza zvakanyatsonakaizvo vateveri vangave vachida kubhadhara uye nemamiriro ezvinhu avaizodirana kuenda kunzvimbo yekuratidzira yeCologne. Pakati yaiva mubvunzo wekurwadziwa kwechikumbaridzo chemutengo wetikiti mushure mekukwanisa kuwedzera. Hardcore mafeni haafanire kunyara kubva kune yakakwira mitengo. Kunyangwe izvi zvinoshandawo kune avhareji mushanyi ndeimwe nyaya. Kana iwe ukatarisa mhuri yakanaka senge "Spiel noch!" Pasi pemamiriro ezvinhu aya, zvinoratidzika sechinhu chisiri chechokwadi kuti vanopfuura vashoma vevashanyi vaizoenda kune zvigadzirwa zvesimbi.
Kana trade fair ikaitika zvachose, ingangove ine nhamba yakaderera zvakanyanya yevashanyi. Mufananidzo: Volkmann
Icho chokwadi chekuti varongi havatonge 2021 segore rechiitiko chakachengeteka chakatoratidzwa neve kutanga kukanzurwa kweCCXP Cologneizvo zvisina kuitika gore rakapera. Izvi zvinovava kuchikwata chesangano, mushure mezvose, iyo fairi yakangopemberera kutanga kwayo muna 2019. Pamutambo wematoyi muNuremberg, uri kufamba nenzira mbiri. Mushure mekutanga kwepamhepo kweiyo offshoot "BrandNew", iyo-saiti yekutengeserana fair ichaitika muzhizha. Kunyangwe iyi iri yakachena kutengeserana fair, zvinodikanwa zvakafanana neizvo zve "Spiel noch!". Pamusoro pezvo, mutambo wematoyi wakatonyanya kune dzimwe nyika. Izvo zvinounza chimwe chinhu chakakosha mukutamba. Nekuda kwekuti mushandirapamwe wekudzivirira muGermany unogona kukurumidza mumavhiki mashoma anotevera hazvireve kuti izvi zvinoshandawo kune dzimwe nyika. Chikamu chakakosha chevashanyi chaizofanira kugara kure kana, kana zvichidikanwa, vanogona kutora chikamu mumamiriro ezvinhu asati ataurwa: Chitupa chekudzivirira? Zvino yepasi rose ine mitemo yepasirese? Kusvika zhizha? Hazvigoneki. Ikozvino, mutambo wakanaka waigona kungoitirwa vateereri veGerman. Ipapo mubvunzo unoramba uripo, zvakakosha here?
SPIEL'2021 muEssen inogona kuve nemikana - seyambotaurwa EGX 2021 muLondon - nekuda kwekunonoka kwa21. Sekureva kwaMerz-Verlag, mutambo wemitambo uchaitika kubva Gumiguru 14 kusvika 17. Parizvino kwakanyarara ipapo, iyo yekupedzisira Facebook yekupinda kubva muna Mbudzi 2020. Iyo hibernation paFriedhelm Merz Verlag ichiri kureba zvisina kujairika: Kunyangwe kuchiri kutanga kwegore, vangangove vakamirira zvichangobva kuitika maererano nenhamba dzekorona, vaccinations uye Forecasts kuitira kuti vakwanise kuita ongororo. Gore rakapera waive nazvo dhijitari yemazuva emitambo yepasirese yakaziviswa muna Chivabvu. Saka pachine nguva yekutanga kana kunyange inobatika ruzivo nezve SPIEL'21. Nekudaro, tichifunga nezvedenda riripo, hazvigoneke kuti vanhu vanopfuura mazana maviri ezviuru vauye pamwechete mudzimba dzekuratidzira munguva yechando. Kana ukasabvisa vateereri vepasirese, ungangofanirawo kusabata vaparidzi vanoshanda kunze kwenyika asi vachitarisa kune vatengi vemutauro wekunze (vanotaura Chirungu). Izvozvo zvingasiya varatidziri vepamusoro vakakwana here? Munhu wose aizoitawo here? Vaparidzi vangangove vakangwarira, mushure mezvese zvavanofanira kuchengetedza vashandi vavo kubva kunjodzi dzehutano - uye, kana paine kusahadzika, vabvumire kuenda kune yekutengeserana fair. Izvozvo zvingava zvinorongwa nouchokwadi hwakakwana here?
Izvi zvinotevera zvinotoshanda kuCCXP Cologne 2021: The trade fair iri kutora zororo gore rino futi. Mufananidzo: Volkmann
Mitemo yakanyanyisa yehutsanana uye yekuchengetedza ichaitwa zvakare paSPIEL'21, pamwe kuburikidza nekubhadhara mari kuburikidza nemari yepamusoro yekupinda kana miripo yemastand. Pamusoro pezvo, kune kubhukidzwa kwehotera kubva kune vanosvika mafeni. Mahotera anotenderwa kuvhurwa mumatsutso here? Kana zvakadaro: kusvika papi? Ungave panjodzi yekukurumidza kubhuka semufani uye uchizosara uine mitengo, SPIEL'21 yobva yadzimwa nekuti denda rakawedzera zvakare mukutanga kwemwaka unotonhora zvisinei nejekiseni? Mitemo yekuonana yaizotaridzika sei mumatsutso zvachose? Iwe unogona sei kudzora uye kudzora izvo pakutengeserana fair? Iwe unofanirwa kuita pasina matafura emitambo here?
Parizvino, hurongwa hwekutengeserana kwevanoronga hunogona kunge hune mazana emhando dzakasiyana. Hapana chine chokwadi, zvishoma zvinofanotaurwa. Izvo zvakakwana here sechikonzero chekuita chiitiko? Pamwe kwete nekuda kwezvikonzero zviviri: Sangano rinodhura mari. Uye: gore rapfuura rakanga risiri iro rinopa mari kune vanoronga. Iwe pamwe haungatore imwe njodzi. Kuoma kwekufunga kwemari kunoratidzwa nemuenzaniso weBerlinCon, iyo denda rinonyanya kurwadza sezvo gungano richiri diki. Vagadziri vanga vaine via Crowdfunding yakakumbira rutsigiro uye akazvigamuchira: Uye zvakadaro zvese parizvino zvinoita sekunge Con muBerlin yaisagona kuitika gore rino kana - zvirinani kwete muzhizha.
Pane hurukuro yakawanda pasocial media. Vamwe vateveri vari kutarisira kuti mutambo wemitambo uchaitika kana mukudonha, asi izvi zvingangove zvishuwo zvakawanda mushure menguva refu ine zviitiko zvishoma. Vamwe vanoongorora mamiriro acho ezvinhu nenzira yechokwadi kusvika pakusava netariro. Kunyangwe 2023 inotumidzwa segore rekutanga chiitiko. Mukupedzisira, varongi vangangove nesarudzo pakati pekukanzura kana online trade fair.
Asmodee | Plaid Hat Games | Mvura Yakakanganwa | Kennerspiel |... * 47,99 EUR tenga
Kare Zombicide: Undead kana Alive - Kickstarter inokwenya iyo miriyoni mamaki
Inotevera Mitambo yepamhepo muna 2021: mitambo yatinogona kutarisira zvakanyanya
Kickstarter Report: Gumiguru 2016
Mice nemakiyibhodhi emitambo: Roccat inotangisa zvinhu zvitsva
Meeplebox: Iyo ramangwana rebhodhi mutambo wekutenga mukuona
Riders Republic iri pano: mutambo wekunze wemitambo uripo